Kushanda: Senge aerospace, peturu, indasitiri yemakemikari, simba remagetsi, simbi, dziviriro yenyika, mwenje nemachira indasitiri uye zvimwe zvivakwa zvekunze zvine moto wekudzivirira simbi inorema zvikamu, uye zvinonyanya kukodzera kune mamwe mapurani esimbi ane njodzi yemoto. hydrocarbon makemikari (senge mafuta, solvent, nezvimwewo), senge petrochemical engineering, garaji, oiri kuchera chikuva, oiri yekuchengetedza nzvimbo yekutsigira furemu.
Kuvaka kwakanaka: kupfira, kupfeka roller uye kukwesha kunogona kushandiswa. Strong adhesion: ine yakasimba adhesion kune epoxy mhando, alkyd mhando uye phenolic mhando antirust primer, iyo yakasimba uye yakasimba, inoshandiswa zvakanyanya, ine mhando yepamusoro uye yakaderera mutengo. Cdgc-indoor Ultra-yakatetepa simbi chivakwa moto chinodzivirira inokodzera yakakodzera kuchengetedza moto kwenhengo dzinotakura-mutoro dzakasiyana siyana simbi dhizaini mapurojekiti ane moto wekudzivirira muganho wakakura kupfuura 2 h.
Ichi chigadzirwa rudzi rwehutema hwakadzika, husina solvent (husina kunaka), kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, kusingakuvadzi kumuviri wemunhu, kutaridzika kwechimiro chemucilage. Inoshandiswa zvakanyanya mukudzivirira kwenyika uye mafuta, Chemical indasitiri, gasi chiteshi, chinotsiviwa, imba yekuchengetera ine ngozi uye dzimwe nzvimbo dzinoputika dzine njodzi, sekuratidzira chubhu kana vashandi vetambo
Iyo inoshandiswa kuputika-chiratidzo chekupatsanurwa uye kuiswa chisimbiso. Inogona kushandiswa kuputira waya, mubatanidzwa, tambo, pombi, waya yepasi, nezvimwe kudzivirira moto.
Flexible organic plugging zvinhu zve intumescent fireproof chisimbiso
Moto ivhu inonziwo organic fireproof plugging zvinhu, izvo zvinogona kukamurwa muhombodo uye bhokisi. Mashoko acho anonyanya kushandiswa kuvhara maburi etambo netambo kudzivirira moto wetambo netambo kubva pakupararira kubva mumaburi kuenda kumakamuri ari padyo uye kudzikisa kurasikirwa kwemoto. Iine mabasa ekudzivirira utsi, kudzivirira moto uye kudzivirira guruva. Naizvozvo, izvo plugging zvinhu zvinonyanya kushandiswa muzvigadzirwa zvemagetsi, maindasitiri uye emigodhi emakambani, zvivakwa zvepamusoro-soro, simba rekuvaka ngarava, posvo uye kufonera, chinzvimbo, simbi uye imwe sisitimu yeinjiniya.
Inorganic fireproof plugging zvinhu, inozivikanwawo nekukurumidza kuisa zvinhu zvisina moto.
Inowanzoidaidzwa nekukurumidza kuisa zvinhu zvisina moto
Db-a3-cd01 bhegi rinodzima moto mhando nyowani yemoto-chiratidzo chinotsigira chinogadziriswa chakagadzirwa nekambani yeWeicheng zvinoenderana neyakajairwa nyika ye gb23864-2009 (isina moto plugging zvinhu). Chimiro che db-a3-cd01 bhegi rinodzimisa moto senge mutsago mudiki, iro rekunze rakagadzirwa neyakagadziriswa girazi fiber jira, uye mukati izere nemusanganiswa wezvinhu zvisina kupisa zvisingatsve uye zvakasarudzika zvekuwedzera. Chigadzirwa hachina chepfu, hachina kunaka, hachina ngura, chinodzivirira mvura, chinoshingirira mafuta, chinopesana neHygrothermal, chando-chinonyungudika kutenderera uye hunhu hwakanaka hwekuwedzera. Inogona kubviswa uye kushandiswazve paunoda. Inogona kugadzirwa mumhando dzakasiyana dze firewall uye isina moto dura zvinoenderana nezvinodiwa zvakasiyana nevashandisi, uye zvakare inogona kushandiswa kuvhara maburi anoda kurapwa kwemoto. Kana uchinge wasangana nemoto, izvo zvishandiso zviri mupakeji inodzima moto zvinopisa uye nekuwedzeredzwa kuita huchi hweuchi, ichigadzira rakamanikana rekuisa mucherechedzo kuti uwane kudzivirira moto uye kupisa kupisa, uye nekunyatso kudzora moto mukati meiyo renji. Kana iyo plugging ukobvu ichisvika 240mm, iyo moto yekudzivirira muganho inogona kusvika kupfuura 180min.
Iyo CDDT-AA mhando tambo inodzora moto unodziya ndiyo mhando nyowani yemoto unodzora unodzivirirwa nekambani yedu zvinoenderana nematanho eGA181-1998 Ministry of public security. Chigadzirwa chinogadzirwa nemhando dzese dzemoto-dzinodzora, plasticizer zvichingodaro. Iyi ndiyo tambo yemvura yemagetsi uye yemagetsi munyika.Ichi chigadzirwa chinogona kuburitsa yunifomu uye gobvu chipanje kuputira furo kana ichipisa. Inogona kudzivisa nekudzivirira kupararira uye kupararira kwemurazvo, uye kuchengetedza waya netambo. Zvakanakira kwazvo ndezve: kuchengetedzwa kwezvakatipoteredza, hapana kusvibiswa, isina-chepfu uye isina hunhu, hapana tyisidziro kuhutano hwevashandi vekupfeka. Ichi chigadzirwa chinewo hunhu hwekupfekedzwa kwekutetepa, kusimba kwakasimba, kushanduka kwakanaka, uye kuputira kwakanaka uye mabasa ekurwisa ngura.
Inopisa moto isina kupfeka yesimbi simbi chinhu chitsva chepamusoro-giredhi chengetedzo yezvakatipoteredza chigadzirwa chakagadzirwa nekambani yedu zvinoenderana neyepasi rose gb14907-2018. Kana chigadzirwa chapisa, chinhu chinopupa firimu chinozoparara kana chapiswa kuita dense uye yunifomu yekuputira kupisa uye oksijeni kuputira kuwedzera kabhoni. Kuti tidzivirire chimiro chesimbi.